Waxaan aaminsanahay B2B Sayniska Warbaahinta Suuqgeynta Guusha waa la buun buuniyay | Martech Zone
Khamiis, Maarso 16, 2017 Khamiis, Maarso 23, 2017 Douglas Karr
Aynu ku bilowno wada hadalkan adoo dhahaya dhamaan cadeymaheygu waa sheeko. Ma sameynin cilmi baaris baahsan oo aan ku caddeeyo dareenkayga; Kaliya waxaan sii wadaa in dad aad iyo aad u tiro badani igu xantaan inayna u isticmaalin warbaahinta bulshada natiijooyinka. Oo iyagu ma ay silcayaan oo dhan; Shirkadahoodu wax weyn ayey qabanayaan.
“Sug!”, Waxaad ku dhawaaqaysaa, “Waxay sameyn karayaan wax aad u wanaagsan!”
Nope. Mid ka mid ah shirkadaha waxay leedahay wax ka badan 100% kobaca YoY ee suuq tartan sare leh. Midkoodna hoggaankooda ama shaqaalahooda midkoodna ma ilaaliyo joogitaanka warbaahinta bulshada ee joogtada ah. Inta badan hogaankooda waxay ka yimaadaan shirarka ay ka soo qeyb galaan adduunka oo idil. Waxay ku leeyihiin koox iib ah gudaha oo la socota hoggaamiyeyaashaas oo wadista beddelaad guryo.
Ganacsi kale ayaa dhisay xafiis cusub oo iskiisna u maalgeliya kobaca. Waxay leeyihiin shey is-dhexgal ah oo aan wax tartan ah ku lahayn warshadaha Warshadaha, waxayna la saxeexdaan macaamiisha sida ugu dhakhsaha badan ee ay tusi karaan demo. Dhab ahaan - malaha baraha bulshada.
Kama hadlayo kaliya kormeerka digniinta… Waan hadlayaa Eber dadaalka la galiyay xeeladahooda warbaahinta bulshada.
Dhinaca kale, waxaan haystaa hal shirkad oo aan la shaqeeyo oo ii sheegtay inaysan waxba qabanaynin laakiin dhiirrigelinta warbaahinta bulshada maxaa yeelay si fiican ayey u shaqeysaa. “Maxaa kale oo aad isku dayday?”, Ayaan waydiiyey. Milkiilaha ayaa yidhi: "Waxba, uma baahnin." Waa wax xiiso leh, sidaa darteed hal shirkad oo ku tiirsan natiijooyinka warbaahinta bulshada waxba kama qabanayso warbaahinta bulshada. Sidee ku ogaadeen inay shaqeyneyso ?!
Saaxiibkey ayaa goor dhaweyd ii sheegay in CMO uu dhawaan shaqada laga joojiyay ka dib bilooyin uu guddiga uga warbixinayay cabirro aan waxba tarayn. Pageviews, Raacayaasha, Waxyaabaha Jecel, iyo Retweets… oo aan haba yaraatee xiriir la lahayn wax dakhli abuur ama koritaan ah.
Waxaan leenahay macmiil u dabaaldegay awooddooda warbaahinta bulshada, iyagoo urursanaya taageerayaal badan oo ka socda baraha bulshada. Waxay si aad ah ugu shaqeeyeen si adag oo ay ugu hawl galaan una kobciyaan shabakadooda warbaahinta bulshada. Laakiin markay timaado demos iyo soo dejin, lambarradu weligood iskuma xirmin.
Indha indhayntayda sheeko-xireedka waxay ku sii socotaa degellada internetka. In kasta oo aan ka helo nibbles iyada oo loo marayo LinkedIn, Facebook iyo Twitter ayaa soo saara Eber dakhliga. Waxaan dhawaan tijaabiyey oo aan kaxeeyey tobanaan kun oo akhristayaal dheeri ah si aan ula macaamilo iyada oo loo marayo maareeyaha Facebook. Haa .. waad qiyaastay. Ma tagin
Afar dhibaato oo ka taagan suuqgeynta baraha bulshada
Waxaa jira afar dhibaato oo dhaawacaya awooddeena si aan u helno iib weyn oo warbaahinta bulshada la xiriirta:
Ujeeddo - Miyay taageerayaashaada iyo kuwa raacsan ee warbaahinta bulshada kuula socdaan adiga sababtoo ah waxay baarayaan iibsigooda soo socda iyo hubinta shirkadaada? Malahayga waa taasi tiro aad u yar oo ah dhagaystayaashaada guud… oo baashaal isku daya inaad si sax ah u ogaato cidda ay yihiin.
Qaadashada - kala guurka ka dhexeeya shabakadaha bulshada iyo kanaga Analytics waxaa ka buuxa galdaloolooyin, tan ugu weyn oo dhan waa iib ka yimid Tweet ama Facebook Update. Ma ahan wax aan macquul aheyn; waa iska adag tahay.
Funnels - suuq kasta wuxuu jecel yahay inuu sawiro masaxaada isbadalkiisa wuxuuna kuu sheegi doonaa in kaqeybqaadashadu ay muhiim u tahay inta udhaxeysa wacyiga iyo badalida. Dhibaatadu maaha amarka; waa inta udhaxeysa. Macaamiisha ayaa indha indhaynaya masaxa qabow ee rajadu ay uga boodi doonto tillaabada ugu dambeysa tan xigta. Xaqiiqadu aad ayey u kala duwan tahay. Beddelka ayaa masaafo ka fog isku xirka warbaahinta bulshada. Waxay qaadan kartaa sanado inaad ku kaxeyso maamulka guriga ee aad leedahay waa in laguu aqoonsadaa. Taasi waa tan dadaal ah oo aad ugu yar soo celinta maalgashiga.
Vanity - miyaanay dareemin wax la yaab leh markaad hesho boqolaal ama kumanaan aragtiyo, jacello, tweets, retweets, share ama tartamada galalka? Way qabataa - kooxdayadu way samaysay oo shan-sare ayay ku yeelatay awooddeena warbaahinta bulshada. Dhibaatadu, dabcan, waxay ahayd in midkoodna qiyaastaasi uusan u horseedin ganacsi kasta. Marka uusan taleefanka garaacin, suuqleydu waxay jecel yihiin inay tilmaamaan cabirrada waxtarka leh si ay dareenka uga jeediyaan.
Suuqyadu waa inay ka shaqeeyaan dakhliga dib ugu noqo rajada. Aqoonsiga halka dakhligaagu ka imanayo waa inuu noqdaa mudnaantaada koowaad ka dibna ganacsiga ku kaxeeyaa kuwa dhexdhexaadka ah iyo kanaalada.
Ma dhahayo baraha bulshada ma shaqeyn karto ama ma shaqeyn karto, waxaan kaliya ogaanayaa in inta badan aan arko maalgashiga suuq geynta istiraatiijiyado kale oo leh soo laabasho aad u sareysa oo ku saabsan maalgashiga, oo u baahan dadaal aad u yar, ayna sahlan tahay in lala socdo.
Sidoo kale kama quusanayo baraha bulshada. Waxaan garwaaqsaday in wacyiga sumadda, aqoonsiga, maamulka, iyo kalsoonidu ay dhammaantood horseedi karaan natiijooyin wanaagsan. Kaliya waxaan ku qanacsanahay natiijada warbaahinta bulshada badanaa waa la buunbuuniyaa. Haddii qof kuu sheego wax ka duwan, ka hubi meheradda oo baar sida lacagta loo siiyo.
Malahayga waa inaanay soo marin baraha bulshada.
Tags: dhacaxayeysiiska facebookLinkedInwarbaahinta bulshadasheegashada warbaahinta bulshadaTwitter